Tag: nyeredzi | Martech Zone
Kushambadzira Kwenhare: Ona Iyo Yechokwadi Inogona Nemi Mienzaniso
Chipiri, July 3, 2018 Douglas Karr
Kushambadzira kwenhare - icho chinhu chaungave wakanzwa nezvacho, asi, sezvingabvira, chiri kusiya pane chinopisa kumashure izvozvi. Mushure mezvose, kune akawanda nzira dzakasiyana dziripo dzemabhizinesi, ko kushambadzira nhare hakusi iyo inogona kuregeredzwa? Chokwadi - iwe unogona kutarisisa pane iyo 33% yevanhu vasingashandise nharembozha panzvimbo. Iko kushandiswa kwemidziyo yenhare pasirese kunotarisirwa kukura kusvika ku67% na2019, uye tiri
Mcommerce Iri Kukura mazana maviri muzana nekukurumidza kupfuura Ecommerce
Chitatu, September 21, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Unoyeuka here chinhu chekutanga chawakatenga pafoni yako? Handina chokwadi chaizvo pandakatanga kutenga nharembozha yangu, ndiri kufungidzira kuti zvaive kuburikidza neAmazon kana Starbucks nharembozha. Kutenga nharembozha kwaive nemipimo yakati wandei - imwe yaive iko nyore kwekushandisa uye tekinoroji, imwe yacho yaingovimba nekutengeserana. Kutenga nharembozha ikozvino kuve kwechipiri hunhu, hazvo, uye zviverengero kubva kuCoupofy zvinoratidza. Saizvozvo,
CoffeeSender: Tumira iyo Starbucks Chipo Kadhi neKumwe Kudzvanya
NeChishanu, Nyamavhuvhu 26, 2016 NeChishanu, Nyamavhuvhu 26, 2016 Douglas Karr
Kunze kweronda rangu, ndiani asingade Starbucks? Takanyora zvisati zvaitika kuti dzimwe nguva zvinhu zvidiki zvaunoita zvine simba zvakanyanya. Sezvo iwe usingakwanise kutendeuka munharaunda zhinji usingaone Starbucks, uye Starbucks yakafanana chaizvo nemisangano yebhizinesi, zvinoita sezvine musoro kuti iwe unofanirwa kuve neapps yakabatanidzwa neCRM yako kwaunogona kubhowa $ 5 Starbucks® eGift Kadhi kuburikidza email. CoffeeSender chirongwa chinobvumidza
Starbucks, Iwe Unogona Kuva Uchiita Zvemagariro Zvirinani
Chipiri, Zvita 29, 2015 Chipiri, Zvita 29, 2015 Douglas Karr
Ini ndinodhonza pasocial media kadhi zvishoma pandinofanira. Ini pachangu, semuridzi webhizinesi, ini ndinowanzo gunun'una kana ndikaona mutengi achirovera pachena kambani online. Kunyanya kana iri mutemo uye kazhinji isiri iyo murombo mutengi webasa mutengi mhosva CSR's hazviwanzo gadzira iyo mirau, zvinowanzoitika kuti munhu ari kumusoro kumusoro uye zvishoma kubva mukusvikira inobata izvo zvinhu. Mune ino kesi, zvakadaro, ini ndinofanira kugovera chiitiko ichi pachena
Aya ma Statistics Anofanirwa Kukanganisa Maonero Ako Ekushambadzira Kwenhare
Svondo, November 8, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Wakambotora here yazvino vhezheni yesoftware App - iOS, Android? Tichiri kushanda kugadzirisa izvo zvirimo asi hwaro huripo, uye zvakatora chero kuyedza kuti ubvise pasi nekutenda kune inoshamisa mobile app yekuvaka chikuva kubva kuBluebridge! Isu tinofara kwazvo nezve mikana. Isu tatova neyedu yekushambadzira podcast uye yedu MarketingClips akateedzera kuzadza iko kunyorera, zvakare! Tiri zvakare kutsikisa zviitiko uye tinotogona kutumira